Mayelana NATHI - Zhenjiang Kingway Optical Co., Ltd.
Siyethemba ikhwalithi nekhwalithi yesevisi kungakhuphula inani lomkhiqizo wethu.
IZhenjiang Kingway Optical Company icaciselwe ekwenzeni ama-lens angama-CR39,1.56,1.61index, ama-lens angama-1.67 aphezulu kanye namalensi e-bifocal, amalensi aqhubekayo namalensi e-polycarbonate. Le nkampani iphinde yathuthukisa uchungechunge lwamalensi we-photochromic we-1.56 no-1.61, njengombono owodwa, umbono we-bifocal, flat-top, round-top, blended-top, progressive (long & short) nokuningi. Wonke amalensi angakhiqizwa aqediwe futhi aqediwe.
Le nkampani iphinde inikeze i-RX lens, umkhiqizo omusha odumile womkhakha we-optical ngenxa yesidingo esikhulu sokwakheka okwenziwe ngokwezifiso. Siphinde sikhiqize i-achromatopsia lens (umbala wobumpumputhe) nelensi yokuvikela umshayeli.
Amalensi namafreyimu ethu ayathengiswa emhlabeni jikelele futhi anedumela elihle kuzo zonke izimakethe zawo zaphesheya kwezilwandle.